Ameerikaafi Sudaan dhimma Itoophiyaarratti maal mari'atan? - Wanofi.com
Ministirri Dhimma Alaa Ameerikaa Antoonii Biliinkan dhimma yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiruufi waa’ee adeemsa motummaa ce’umsaa Sudaan ilaalchisuun Ministira Mummee Sudaan, Abdallaa Haamdook, waliin mari’atan.
Aangaa’oonni lamaan waraanni kaaba Itoophiyaatti mudate gara naannoolee Amaaraa fi Affaariitti babal’achuusaa akkasumas yaaddoo haala namoommaa naannoo Tigraayii keessatti badaa dhufee irratti mari’atan.
Ibsa Waajjirri Dhimma Alaa Ameerikaa Roobii galgala baaseen, aanga’oonni lamaan dhimma gabaasaalee loltoonni Ertiraa ammas deebii’uun Itoophiyaa galaniiruu jedhuufi dhiibbaa tasgabbii naannichaa irratti qabaatu ilaalchisuun marii taasisaniiru.
Ministirri Dhimma Alaa Ameerikaa Antoonii Biliinkanii fi Ministirri Mummee Sudaan Abdallaa Haamdook, qaamooleen lamaan dhukaasa dhaabuu waliigaltee irratti hundaa’e irra akka gahaniif jajjabeessuuf waliigalaniiru.
Akkasumas marii siyaasaa hunda hammataa fi walabummaafi tokkummaa Itoophiyaa eegsiisuuf akkasumas namoonni gargaarsi barbaachisu daangaa tokko malee akka argatan taasisuuf hojjachuuf walii galaniiru akka ibsichi jedhetti.
Kana malees aanga’oonni lamaan ce’uumsa dimokiraasii Sudaan keessatti gageeffamu fooyyeessuu fi walitti dhufeenya Ameerikaa fi Sudaan cimsuun haala itti danda’amurratti mari’atan.
Dhiheenya Suudaan daawwatanii kan turan Hoggantuun Dhaabbata Gargaarsaa, USAID, Saamaantaa Paawoor naannooleen bakka waraanaan dura turaniitti akka deebii’aniif gaafataniiru.
Haaluma kanaanis humnootiin TPLF naannoolee Amaaraa fi Affaarii akka bahan akkasumas humnoonni Amaaraa Tigraayi lixaa keessaa akka bahan gaafataniiru.
Hoggantuun kunis waraanni furmaataa waaraa ta’u akka hin dandeenyee kaasuun, waraanni Ertiraa Tigraay keessatti argamus yeroo dhumaatiif guutummaan bahuu qabu jechuun toora tiwiiterii isaanii irratti barreessaniiru.
Saamaantaan itti dabaluunis ”Deeggarsi namoommaa Tigraay akka qaqabuuf qaamooleen hundi lola dhaabu qabu,” jedhanii ture.
Ejensiin Saganataa Nyaataa Motummoota Gamtomanii, walitti dhufeenyi Itoophiyaafi Sudaan jiddu jiruu gaarii ta’uu baatulleen, Tigraayiif karaa Sudaaniin deeggarsa dhiyeessuuf hojjataa jiraachu ibsuu, Asoosheet Piress gabaaseera.
Mariin deeggarsa namoommaa dhiyeessuuf cufameera kan jedhame naannoo Tigraay qaqqaabuuf taasifamu baay’ee rakkisaa ta’uu, Daarektarri I/A Sagantaa Nyaataa Addunyaa Sudaan, Maariyaan Waardi dubattaniiru.
Maariyaan Waardii kanaan dura karaa Sudaaniin qamadii toonii kuma 50 gara Itoophiyaa geessuu ibsaniru.